အစည်းအဝေးတွေနဲ့မိနစ် | Holmbygden.se
ဒီနေရာတွင်အစည်းအဝေးများအကြောင်းကို protocols များနှင့်သတင်းအချက်အလက်ကိုတွေ့လိမ့်မည်ကြောင်း.
အဆိုပါ protocol များအတွက်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက် “pdf-format နဲ့” သို့မဟုတ် “စကားလုံး-format နဲ့” အသစ်တစ်ခု window တွင်ဖွင့်လှစ်သူတို့ကိုသင်နှိပ်လျှင်. သင်တစ်ဦးစာရွက်စာတမ်းကို download လုပ်လိုပါကညာဘက်ကလစ်နှိပ်ပါနဲ့ရှေးခယျြ “ပစ်မှတ် Save As ကို…” (သို့မဟုတ်သင့် browser မှာညီမျှ).
သင်လိုအပ် PDF documents တွေဖတ်ရှုဖို့
၏ Acrobat Reader ကို (ဤနေရာတွင်ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲ).
HBU က F / T ကခြံဝင်းအစည်းအဝေးများ
120313 အဆိုပါနှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေး၏မိနစ် (ချိန်ညှိမရ).doc
အသက်ရှင်သောသတ္တဝါ Holmes များအတွက် Holmes Idea အစည်းအဝေး
Österström, 16/1 2013 VISA.ပိတ်.
ရှင်သန်မှုလေ့ကျင့်ရေး ခရစ္စမတ်ကလူအများကြီး ကပ်. Holmes ၏လုံခြုံရေးအဘို့ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွါးတော်ရှေ့မှာသောမတ်စ်Åslinကျင်းပ. ဒီနှစ်ဟာလေ့ကျင့်ရေးဖြစ်နိုင်.
ကျေးလက်ပိုက်ဆံရည်ရွယ်လေတိုက်တာဘိုင် Holmes နေထိုင်သူများအဘို့စောင့်ကြည့်. သူတို့နှင့်အတူအဆက်အသွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်သဘောတူ, အခြားသူများအကြားပါနဲ့. Nötåsenဂေါ်ပြားမှလမ်း. ဖေဖော်ဝါရီလဖြိုဖျက်ရွက်တိုင်နှင့်ဆောက်လုပ်ရေးတိုင်းတာခြင်းများဖြစ်လိမ့်မည်. မဆိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသင်းအဖွဲ့စောင့်ဆိုင်းနိုင်ပြီးကျနော်တို့ကအကောင်းဆုံးကျေးလက်ထောက်ပံ့ကြေးလက်ခံရယူကိုက်ညီအဖှဲ့အစညျး၏အဘယ်အရာကိုပုံစံမြင်ရပါလိမ့်မယ်. အဆိုပါအလှူငွေတစ်ခုလုံးကိုခရိုင်အကြိုးခံစားသမျှဖြစ်ရလိမ့်မည်.
အဆိုပါအခြေအနေအပေါ်ပြန်ကြားရေးနှင့်အတူ အကြီးတန်း Home နဲ့ဆရာရဲ့အိမ်ရာ.
ဒါကြောင့်ကုန်ကျ တစ်ခုတည်းသော 30 နှင့် ICA Liden hemkördfrånအစားအသောက်ဆိုင်တစ်အိတ်ရဖို့ SEK servicelinjen မှတဆင့်. ဒီလိုလုပ်ဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ.
Tommy နှင့်အတူ check လုပ်ထား Björn Nordling – Mittlandia လာနှင့်ခေါင်းဆောင်စီမံကိန်းများနှင့် ပတ်သက်. ပြောဆိုရန် (မြေယာ Bygdsiljum bidrag). သူသည်ယနေ့တက်ရောက်ရန်နိုင်ဘူး. နောက်တဖန်ကြိုးစားနေ.
Macken အပြီးတိုင်ပိတ်သိမ်းနေသည်. စစ်ဆင်ရေး option ကို / ငှားရမ်းဆန်းစစ်ခြင်းကိုဆက်လက်!
ဆွေးနွေးကြသည်ခေါင်းဆောင်စီမံကိန်းများကို ဥပမာဒေသများရှိခေတ်ပြိုင်စီမံကိန်းများကိုတစ်ဗဟုမောင်းထုတ်ရန်အဖြေတစ်ခုအဖြစ်. စီးပွားရေးလုပ်ငန်း / Mack, တိုးချဲ့ဘရော့ဘန်း / တယ်လီဖုန်း, ထေို (m.h.a. Heico Basten). အတိုချုပ်ဒေသအလိုက်စေတယ် 30 % ကုန်ကျစရိတ်နှင့်ထောက်ခံမှုထောက်ပံ့ငွေ၏ကျန်ရ. 30 %-ကုန်ကျစရိတ်စေတနာ့ဝန်ထမ်းအလုပ်တန်ဖိုးနိုင်ပါသည်. သည်အခြားစီမံကိန်းများမှလှုံ့ဆော်မှုများတွင်တွေ့နိုင်ပါသည် landsbygdsnätverkets projektdatabas.
တတ်နိုင်သမျှအကြံပြု. လေ့လာမှုသို့မဟုတ် ကနေအသိပညာရှာမှီး Alby နှင့် Ljustorp ဘယ်လောက်သူတို့ကဓာတ်ဆီဘူတာရုံ / ဆိုင်ကို run.
သစ်တစ်ခုကြောင့်ရယ်စရာ ကလေးငယ်များ၏သေနတ်မိသားစု Holmes သို့ပြောင်းရွှေ့. Lars-Ake Sundberg ၏ငှားရမ်းသင့်ပါတယ်. ပိုများသောဗလာအိမ်များထွက်ငှားဖို့ကြိုးစားရန်တိုက်တွန်းထားပါသည်, ကလေးတွေနဲ့အတူမိသားစုများအခမဲ့ခံစားရ. မှ A ကောင်းဆုံးလမ်း “သု-bo” ပြီးတော့လိုအပ်ခဲ့လျှင်. မဝယ်နိုင်ပါ.
ဆိုက်ကို ကြော်ငြာ features တွေ အတွက် nyhet နှင့် kalender အသုံးပြုရမှစတင်ပါပြီ, ဘရာဇီယာ!
ဘတ်စ်ကားခရီးစဉ် ဆွေးနွေးတင်ပြ. ပိုများသောယခုသွားရထက် 2008, သေးငယ်သည့်လူဦးရေပေမယ့်. Holmes အဖြစ် Indal Liden ထံမှ Kovland ဖို့ဘတ်စ်ကားနှုန်းတူညီအရေအတွက်ကဒါဟာဝင်. ပိုများသောကွီးရှယျအိုမြားမြို့မှယခု Holmes ဘတ်စ်ကား go, Birsta M.M. အတွက်စျေးဝယ်များအတွက်. ကသာကုန်ကျပြီးကတည်းက 100SEK / လ (!!) för dem att åka buss inom hela kommunen. ဖြစ်နိုင်သမျှအပေါ်ဆုံးဖြတ်ချက်များ. turändringarကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖွစျလိမျ့မညျ. Funnily မလုံလောက်ခြင်း, ကောင်တီကောင်စီပြန်ဖြတ်ဖို့လိုသည်ချင်တယ် 30% ဘတ်စ်ကားပေါ်, မြှို့နယ်ရန်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှစ်ဆလိုလားနေချိန်မှာ 2020. ကောင်းသောထောက်ခံမှုဗဟို, ကျေးလက်ဒေသများနှင့် Holmes လည်းမရှိ. Holmes-Sundsvall ခရီးသည်အကြောင်းပိုမို Read.
ဘတ်စ်ကား / ဘတ်စ်ကားကြိမ်အပေါ် comments သို့မဟုတ်ändingsförslag Tommy ပြေးအကွာအဝေးမျဉ်းတားအမြဲကြိုဆိုပါတယ်နေကြတယ်; tommie@trapatronen.se .
Liden သတင်းစာ, ထို့အပြင် Holmes အတွက်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေထားတဲ့, ဒြပ်စင်အဘို့ကပိုပစ္စည်းတောင်းနှင့်ဝမ်းမြောက်စွာ Holmes စာမျက်နှာကနေပိုပြီးအကြံပြုချက်များကိုလက်ခံ.
အဆိုပါရေခဲနှစ်များတွင်မှုများကိုထည့်သွင်းတွက်ချက်ရမည်ထင်မခံခဲ့ရ, ယခုမူကားတောင်းဆိုမှုများအတှကျတာဝနျရှိသူတို့အသေး flushing စတင်နေပြီ. ရေခဲအေးခဲခြင်းနှင့်ယခုကျင်းပခင်သွားကြဖို့ရှိပါတယ်ကလေးများရှိခဲ့သည် လည်း “စကိတ်စီးဒစ္စကို” သောကြာနေ့ညဥ့်အပေါ် ကြီးမားသောသို့မဟုတ်သေးငယ်တဲ့အဘို့!
ဒါဟာမကြာသေးခင်ကရှိပါတယ် Holmes ၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ဇာတ်ညွှန်းနှင့်တေးသံ တစ်ဦးမယ့်ရုပ်ရှင်လွှတ်ပေးရန်. Inspiration တက်ဒီမှာလှပသောပတ်ဝန်းကျင်ကနေယူထားပါတယ်.
ဂျက်စီကာ Falk ယင်းတေးသံကိုကိုယ်တော်တိုင်.
Next ကို Holmes-အစည်းအဝေးကိုအချိန် / နေ့စွဲ သေးဆုံးဖြတ်သည်ကိုမရ, အောက်တွင်ကြည့်ပါ.
– Tommy လျှင်Björn Norling နှင့်အတူနောက်တဖန်စစ်ဆေးသူခေါင်းဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြရန်စီမံကိန်းခေါင်းဆောင်ရဲ့နောက်အစည်းအဝေးကိုထံသို့မလာနိုငျသညျ့အခါ, ထို့နောက်ကျွန်တော်အချိန်နှင့်ရက်စွဲကိုဆုံးဖြတ်.
– ဒါကြောင့်နောက်ထပ်အသိပေးစာသည်အထိဘူတာရုံ / စုပ်စက်ငှားရမ်းရန်ဖြစ်နိုင်လျှင်ယန္နေ Vinroth အဲလက်စ်နှင့်အတူအရေးတကြီးစစ်ဆေး. မဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်အတွက်အစောပိုင်းကအစည်းအဝေးဒီအပေါ်လိုအပ်မည်အကြောင်း,.
– Niklas ယခင်ကစိတ်ဝင်စားရင်ဆိုင်, ယန္နေ, စတိုးဆိုင်၏နှင့်ငါတို့အကျိုးစီးပွားကိုပြသ.
– Gunilla အခက်ကဲ့သို့ Holmes ခန်းမထဲမှာအကျိုးစီးပွားနှင့် ICA Kovland နှင့်အတူစကားပြော.
Församlingshemmet 5/12 2012 VISA.ပိတ်.
နှင့် ICA Kovland နှင့်အတူအသင်းအဖွဲ့အတွက်တစ်စုံတစ်ဦးက ICA Holmes ခန်းမစိတ်ဝင်စားခဲ့သည်.
ကGimåforsဖြစ်ရပ်များမှ AED ချေးဖို့ဖြစ်နိုင်လျှင်Göran Loviken အံ့သြ. ဟုတ်ကဲ့အဲဒါကိုအလုပ်ရှုပ်မယ့်ဘယ်မှာဖြစ်ပျော်ရွှင်ပါလိမ့်မည်. Olle Frisk ဒီဆက်စပ်နှလုံးအကူစက်နှင့်ငွေစီမံခန့်ခွဲမယ့်အခြေခံအုတ်မြစ် / ရန်ပုံငွေများအတွက်အစီအစဉ်များရှိပါတယ်.
16 december, ကသစ်ကို SMS ကိုအသက်ကယ်အကြောင်းကိုသောမတ်စ်Åslinနှင့်အတူလေ့ကျင့်.
HBU နှင့် ပတ်သက်. အစည်းအဝေးတစ်ခုယူပါလိမ့်မယ်. စီးပွားရေးဝင်းလေတိုက်တာဘိုင် s.c. မှ coupled. Peng built.
ကျနော်တို့Björn Norling ဖိတ်ခေါ်ဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်, mittlandia angående leaderprojekt ဈ Holmes.
ပေါ်ရရှိနိုင်ပါပြက္ခဒိန် holmbygden.se/kalender ဘယ်မှာအစည်းအဝေးများနှင့်လှုပ်ရှားမှုများထားရန်အပေါငျးတို့သအသင်းအဖွဲ့များ. စချပြီးမတိုင်မီသည်အခြားအသင်းအဖွဲ့များအစည်းအဝေးများနှင့်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားပါဘူးသကဲ့သို့သင်တို့ပြက္ခဒိန်တွေ့နိုင်ပါသည်.
အရေးကြီး fixed တယ်လီဖုန်း, တစ်ဦးအာမခံချက်. မြှို့နယ်ရဲ့တာဝန်. လုံခြုံရေးနှိုးဆော်သံ.
မကောင်းတဲ့ဆင်းရဲသားတို့ကိုဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်များနှင့်အတူ Holmes Österström၏ပုံရိပ်နှင့်အင်တာနက်. အခြားသူတွေအကြား comviq ကြသူပြည်သူ့. ဤနေရာတွင်ဆင်းရဲသားကိုလွှမ်းခြုံထရှိ. ပိုကောင်းတဲ့ဆက်သွယ်ရေးရဖို့ကဖြစ်နိုင်?
စီးပွားရေးအသင်းအဖွဲ့ Ang အပေါ်သို့ယန္နေ vinroth ကြည့်. Peng built.
Gunilla နှင့် ICA Holmes ခန်းမထဲမှာအကျိုးစီးပွားနှင့် ICA Kovland နှင့်အတူစကားပြော
Lars-Goran ခေါ်ဆိုခ ICA ဆလိုက် Ang. အစားအစာကိုအမိန့်နှင့် Holmes ရ.
next ကိုအစည်းအဝေး: ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ 16:အီးဇန်နဝါရီလ kl:19.00 Österströmအပေါ်.
Holmes Vallen 21/11 2012 VISA.ပိတ်.
ကြီးကြပ်ရေးမှူးပညာရှင် Hans-Olof Sandströmသူအားလုံးမိဘများစကားပြောပြောပါတယ် (မ - မရ Patrik ဥပမာ) လူတိုင်း Liden အတွက်ကလေးများရှိသည်ဖို့ကျေနပ်ခဲ့တယ်. ပြည်တွင်းပြဿနာများကိုထပ်မံဆွေးနွေးကြ၏.
ယခင်အစည်းအဝေးတွင်: Österströmခရိုင်အသင်းအဖွဲ့ကျန်ရစ်နေသည်? ကÖsterströmအတွက်အားကစားရုံဖွစျလိမျ့မညျ?
အဘယ်သူမျှမပါတီနေရာယနေ့ဖြစ်နေဆဲ. Billy nedervåningထွက်ခွာ, ပုဂ္ဂလိကနေရာထိုင်ခင်းဖြစ်လိမ့်မည်, အပြင်ဘက်စီစဉ်ထားအဆောက်အ - အားလုံး Holmbor များအတွက်. အပေါ်ပိုမိုသောအချက်အလက်များ Holmbygden.se/foreningar/osterstroms-bygdegardsforening/.
ယခင်အစည်းအဝေးတွင်: ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်အစည်းအဝေးနှင့် ပတ်သက်. လက်ကမ်းကြော်ငြာအတွက် Holmes န်းကျင်စာတိုက်ပုံးများအတွင်း လုပ်. ခံရမည်. Flyer Niklas ကရေးသားနေသည်, Anders အားဖြင့် Patrik ထံသို့စေလွှတ် ("ငှားရမ်းထားရဲ့ buddy") Fixed တစ်ခုလုံးကိုပုံနှိပ် 500st. Flyer များ 121121 GimåforsထံမှAnundgårdမှဖြန့်ဝေအချိန်ဖြစ်. Ingela, Kent တစ်ဦး, Catarina နှင့် Kent နောက်ထပ်မြတ်များ N ကိုထောက်ပံ့.
ယခင်အစည်းအဝေးတွင်: Holmes အတွက် Calling! ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဖို့ရွာအပေါ်ယနေ့ဘာသုံးစွဲဖို့ကြိုးစားကြရပါမည်. Niklas သည့် Flyer နှင့်အတူလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်, အရာ / ဖြန့်ဝေပါလိမ့်မည်ထားပြီး.
ယခင်အစည်းအဝေးတွင်: ကျနော်တို့Holmsjönမှအမြင်နှင့်အတူSjöändanမှာချစ်ဘွယ်သောလက္ခဏာပျော်ပွဲစားအတွက်လမ်းဆုံ fix နိုင်သလား.
Catarina / Kent သက်ဆိုင်ရာပို့ဆောင်ရေးအေဂျင်စီကိုင်တယ်မထားပါဘူး, ပြန်လာလိမ့်မယ်. သို့သျောလညျးသငျသညျအိုင်ကိုမမွငျနိုငျပါ ... ထိုသို့ကောင်းသောသစ်တောပါတီရဲ့ဘယ်ဖက်ကယ့်ကိုဖြစ်ပါတယ်?
ယခင်အစည်းအဝေးတွင်: ဓာတ်ဆီစုပ်စက်နှင့်အတူအဘယျသို့တက်င်. အလက်ဇန္ဒားစုပ်စက်ဖယ်ရှားပစ်ရချင်ဟန်? ဆီဖြည့များအတွက် PEMA နှင့်ပြောဆိုသောဖူး. သူတို့က "ဓာတ်ဆီဆိုင်" ကျော်ယူချင်ကဲ့သို့မြည်မဟုတ်. တစ်စုံတစ်ဦးက / အသင်းအဖွဲ့ကျော်ယူလိုပါက သာ. ကောင်း၏. ရွာတစ်ရွာအသင်းအဖွဲ့ / သမဝါယမ Creating? ပိုမိုလွယ်ကူပိုက်ဆံပံ့ပိုးမှုများကိုအဖြစ်ရဖို့. အဆိုပါစုပ်စက်ယနေ့အဘယျသို့ရှိပေ? စွမ်းအား, kortautomat m.w.?
ယန္နေကယခုဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုအလက်ဇန်းဒါးနဲ့အတူ check လုပ်ထား:
ဒါဟာအလက်ဇန်းဒါးကဖယ်ရှားပစ်ရစလေိုကွောငျးမှန်. သူဟာသို့သော်ရေခဲသေတ္တာရောင်းဖြစ်လိုလား, ကွန်ပရက်ဆာ, etc. အဆိုပါစုပ်စက်နေစဉ်. ငါတို့သည်လည်းအမျိုးမျိုးသော options များဆွေးနွေးတင်ပြ.
အဆိုပါအာဏာသိမ်းမှု၏ဥပမာSollerön, Dalarna ထံမှများမှာ. ငါတို့အဘို့အဖြေမော်ဒယ်?
Kent PEMA နှင့်အတူထပ်မံစစ်ဆေးနေ ...
ယခင်အစည်းအဝေးတွင်: သောမတ်စ်သူတို့တစ်တွေစုပေါင်းမော်ဒယ်အတွက်စုပ်စက်နှင့်စတိုးဆိုင်ကို run ဘယ်လို Ljustorp နှင့်အတူစစ်ဆေးနေ.
ဟောင်းတစ်ဦးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်စကားပြော, ရွာတစ်ရွာအသင်းအဖွဲ့အပေါငျးတို့သ gadgets အတူစတိုးဆိုင်ကိုပိုင်ဆိုင် (ရေခဲသေတ္တာ, kyl စသည်တို့ကို). ထိုအခါသူတို့ကပြေးတဲ့သူလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးမှထွက်ငှား. ဤတွင် Holmes အတွက်အခြေအနေကအိမ်ခြံမြေတစ်ခုပုဂ္ဂလိကပိုင်ရှင်နှင့်အတူအနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားသည်, ထို့နောက်ဓာတ်ဆီဆိုင်စဉ်ရေခဲသေတ္တာဏရေခဲသေတ္တာရောင်းချင်.
Holmes အတွက်အနိမ့်လုပ်ခလစာအခွန်အခများ အချို့ကုမ္ပဏီများအတွက် p.g.a. ထိုသို့ထောက်ခံမှုဧရိယာ၌တည်ရှိ၏ (ခုနှစ်, လေယာဉ်ခရီးစဉ်များနှင့်အငှားယာဉ်များသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး). ယန္နေတက္ကစီစစ်ဆင်ရေးအတွက်ယခင်ကကှာ. Niklas Holmes အတွက်စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်မှုကိုလှုံ့ဆော်ဖို့က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ကုမ္ပဏီနှင့်အတူရေးသားခဲ့သည်.
လိပ်၏ Stugun အတွက်ပထမဦးဆုံး ...4သုံးနေပြီ, ပြီးနောက်တစ်နှစ် 125 သုံးနေပြီ. ထိုသို့သောယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့်အတူဒီမှာအလုပ်လုပ်နိုင်ဖြစ်သင့်, အထူးသဖြင့်အိုင်ပတ်ပတ်လည်သစ်ကိုဒဏ်ငွေရိုးနှင့်အတူ.
ကျနော်တို့ရနျလိုအပျ အဆိုပါစာတမ်းများတွင်ပိုမိုအပြုသဘောဆောင်သတင်း နှင့်အင်တာနက် Holmes.
တီဗီရုပ်ရှင်ကိုဖန်ဆင်းထားသည် နွေရာသီမှာထမ်းဘိုး. ရရှိနိုင်?
700 ခရီးစဉ်များနှင့်လှေ M.M. နှင့်အတူ€. ပိုလန်ကနေ.
အဆိုပါ. လေတိုက်: Cable ကို Liden ထံမှLövåsenမှရေးဆွဲထားပြီး. အနာဂတျမှာချဲ့ထွင်ဘို့မရရှိနိုင်င့်ကားများဖြစ်ပါတယ်. built ဖုန်ကြားရှင် diskuterades.
EULOS Vinbolaget ကနေစီမံကိန်းကိုလွှဲပြောင်းယူနေပါတယ်။. အဘယ်သူမျှမရှယ်ယာကိုရောင်းပါလိမ့်မည်. EULOS တိုက်ရိုက်ကျေးရွာသားများနှင့်အဆက်အသွယ်ရှိသည်နှင့်ကြားခံအဖြစ်မြှို့နယ်မပါဘဲတိုက်ရိုက်ကျွန်တော်တို့ကို byapengen ပေးရအကျိုးစီးပွားများ. ကျနော်တို့ Holmes အတွက်ကလပ်အသင်းများအကြားယှဉ်ပြိုင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်နှင့်မသေချာအောင်လုပ်ပါ.
တက်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်အဖြစ်တာမဟုတ်ကတိကဝတ်ယနေ့ Scooter အဘို့အဆောင်. ကလူတက်လာခြင်းနှင့်အတူတူပင်အတိုင်းအတာထဲမှာ snowmobiling မသွားပါနှင့်. ဝမ်းနည်းစရာ.
အပန်းဖြေသိကောင်းစရာများ! စကိတ်စီးကွင်းယခုLillsjön နှင့်Anundgårdရေကန်.
Julaktion ယင်းစီရင်စုနယ်အိမ်သူအိမ်သား နှစ်ပတ်အတွင်းအတွက်. အဆိုပါ backwoods အတွက်ယာဉ်မတော်တဆမှုများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအပေါ် ပို. ပင်အင်ဖို. cardiac arrest (အရေးပေါ်အော်ပရေတာဆုံးဖြတ်) ယာဉ်အသွားအလာမတော်တဆမှု, မီးနှင့်ရေနစ်သေဆုံး (RTJ ပြည်တွင်းရေး command ကိုဆုံးဖြတ်) အဆိုပါ backwoods အတွက် SMS ကိုမှတဆင့်အပြန်အလှန်. (Ljustorp, Holmes, Överturingen, မြောက်အမေရိက Hazel နှင့် Magpie ရုံးတင်စစ်ဆေးနေရာများ).
Heico Basten, ထေိုအတိုင်ပင်ခံStödeအတွက်နေရာထိုင်ခင်း (မူလကနယ်သာလန်ကနေ), သူ့ကုမ္ပဏီ Destis နှင့်၎င်းတို့၏အခွင့်အလမ်းများအကြောင်းကိုပြောဆိုသော. တစ်ဦး socalled အားဖြင့်ထောက်ခံမှုခရိုင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက်ကားမောင်းသူ. Leaderprojekt. အဆိုပါဘုရားကျောင်းရာစီမံကိန်းဖြစ်ပါတယ်.2မိသားစုများသို့ပြောင်းရွေ့ခဲ့ကြ,3fam. အကြောင်း, 1 ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်. BL VarVar ပြောင်းရွှေ့သူ. တစ်ဦး. အီးယူကနေတဆင့်:ဟော်လန်၏အကြီးဆုံးရွှေ့ပြောင်းပြပွဲ, site ကို, Sundsvall အတွက်လိုအပ်သော communities.IT ကျွမ်းကျင်မှု. အတော်များများကမြို့မှာအလုပ်လုပ်ချင်, ဒါပေမယ့်ကျေးလက်နေ. မြို့မှအကွာအဝေးဟာသူတို့ရဲ့အမှု၌အဘယ်သူမျှမပြဿနာပင်ဖြစ်သည်. အဖြစ်များသောဟော်လန်အတွက်ယခုအိမ်တော်ကိုရောင်းဖို့စီမံခန့်ခွဲ, ဒါပေမယ့်အများကြီးအလုပ်အကိုင်များလိုအပ်ပါတယ်. အဆိုပါဆွဲဆောင်မှု Heico နှင့်အတူသဘာဝအများနှင့်livskvalitét.Ettပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြစ်ပါတယ်နှင့်သူ၏ကုမ္ပဏီ Destis Holmes အကျိုးရှိမည်ဟု. ရန်ပုံငွေရှာခြင်းသို့သော်လိုအပ်သည်. တစ်ဦးကခေါင်းဆောင်စီမံကိန်းကိုစတင်နိုင်ပါသည်. ဒါဟာစောင့်ရှောက်ဖို့ကတိကဝတ်လိုအပ်ပါတယ်. Björn Norling, Mittland, ပိုပြီးသင်ပြောပြကြောင့်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုသိနိုငျ.
HBU F/T – Holmbygdens Utveckling Företagand och Turism – Erica Forström (ယန္နေအဆက်အသွယ်)
Holmes ရဲ့အားကစားကလပ် - Eliasson ဘယ်ကြွေး (သောမတ်စ်အဆက်အသွယ်)
Holmes ရဲ့ဒေသဆိုင်ရာသမိုင်း Society က - (သောမတ်စ်အဆက်အသွယ်)
Draka တောင်တန်းစနိုးဆိုင်ကယ်စီးနေသည်ကလပ် - မော်တော်ဆိုင်ကယ်နှင့်စနိုးမိုဘီလ် - ဇန်နဝါရီ-Erik Nilsson (Kent)
PRO Holmes - Staffan Andersson
ဗိုက်ကင်းအကျိုးအမြတ်ကုန်သွယ်ရေးအသင်းအဖွဲ့ - Holger Sahlin (မက်စ်)
ÖsterströmsBygdegårdsförening - Carina Hultman (လာ?)
Österströms Estate - (သောမတ်စ်)
Sandnäset - Diane (ပုန်တုပွညျ)
Fiskevårdsområdet - Stefan Maina (ပုန်တုပွညျ)
ချာ့ဒကောင်စီ - Ulla Grelson (လာ?).
နောက်တစ်ခုနေ့စွဲ 5:မှာဒီဇင်ဘာလ 19:00, Församlingshemmet. ကျနော်တို့ကျောင်းကချေးနိုင်မယ်ဆိုရင် Gunilla တွေ့မြင်, တနည်းFörsamlingshemmet. ကျနော်တို့ကျောင်းမှာအတွက်ဖြစ်နိုင်လျှင် Gunilla တွေ့မြင်, တနည်းFörsamlingshemmet. Niklas ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်နှင့် e-mail ကိုကနေတဆင့်လာမယ့်အစည်းအဝေးကိုကြေညာ.
Holmes Vallen, 18/10 2012 VISA.ပိတ်.
အဆိုပါကျောင်းသည်ယနေ့? ထို့အပြင်လက်ရှိမြုံ p.g.a. ပျောက်ဆုံးနေသူတစ်ဦးဆရာ. အခုကလေးကအခြေခံ၏မရှိခြင်းသို့သော်ကြောင့်ပွဲတစ်ပွဲအတွက် skolort ဤအချိန်တွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်စေသည်. အဘယ်အရာကိုကြှနျုပျတို့သိကြဘူးကျနော်တို့နောက်ထပ်ကလေးလိုအပျကွောငျးဖြစ်ပါသည် (!) ကျောင်းပြေးခြင်းနှင့်အရည်အသွေးစောင့်ရှောက်ရန်.
ကျနော်တို့ကြိုးစားသင့် Holmes အတွက် "ငါတို့အရာ" ကိုရှာတှေ့. ကျွန်တော်တို့ကိုကိုယ်ရေးအချက်အလက်ကြောင့်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တဦးတည်းကျဉ်းမြောင်းဧရိယာ, အဖြစ်ဥပမာ,. Näsåker Urkult ပွဲတော်ရှိပြီးမြေပုံပေါ်တွင်၎င်းတို့၏ခရိုင်ထား.
ကျနော်တို့မှာပိုကောင်းဖြစ်သင့် ရွာ၏ဘုံရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ဆန့်ကျင်အလုပ်, က Holmes အတွက်စည်းလုံးဖန်တီး.
ကျွန်တော်တစ်ဦးစီစဉ်နိုင်သလား နှစ်စဉ် byafest တစ်ဦးအတော်လေးကျဉ်းမြောင်းသောအာရုံနှင့်အတူ. T.ex. countryfestival အတွက်.
တစ်ခုခုဖြစ်နေတဲ့ဆောငျးရာသီအစီအစဉ်နိုင်သလား? အလုပ်ရှုပ်နေသည့်ရက်စွဲ, တစ်နှစ်၏အချိန်ကိုရယူပါ, နွေရာသီမတူဘဲ. အဲဒီမှာတွေအတွက်အကြံပြုချက်များ.
Holmes ဖလားကအတော်လေးလူအနည်းငယ်ဆွဲထုတ်ခံခဲ့ရအဖြစ် - အရှိဆုံးကစားသမား. lilla Holmes ဖလားနှင့်အတူ သာ. ကောင်း၏, မိဘမြားစှာ. အခြားအခွက်နှင့်အတူသို့သော်အလွန်ယှဉ်ပြိုင်. အဆိုပါရေစာဘား၏ဧည့်သည်များနှင့်အသုံးပြုမှုနှင့်အတူကောင်းစွာနွေရာသီအကျင့်ကိုကျင့်စဉ်အတွင်းကျင်းပခဲ့ပါသည်ဘလီစ်ဘောလုံးများပြိုင်ပွဲ.
Österströmsခရိုင်အသင်းအဖွဲ့ကျန်ရစ်နေသည်? ကÖsterströmအတွက်အားကစားရုံဖွစျလိမျ့မညျ? လာမယ့်အစည်းအဝေးထွက် Checked.
En del vet fortfarande inte om Holmbygden.se. Flyer အဆိုပါ Holmes န်းကျင်စာတိုက်ပုံးများအတွင်း လုပ်. ခံရမည်. လက်ကမ်းကြော်ငြာလုပ်ရမည် i syfte att marknadsföra Holmbygden.se och nästa möte. ဤအထားကြ၏ စာတိုက်ပုံးများထဲမှာ.
အများစုမှာနက်ရှိုင်းသောပိုက်မှပြောင်းရွေ့ခဲ့ကြ စိတ်ဝင်စားစရာ. ဒါကြောင့်ဘယ်လို? ပြည်သူ့လည်းယေဘုယျအားဖြင့် Holmes ခရိုင်မှဆွဲဆောင်ရပါမည်.
Holmes အတွက် Calling! ကျနော်တို့ရွာအပေါ်ဘာသုံးစွဲဖို့ကြိုးစားကြရပါမည် ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့၏လိုအပ်ချက်များ, t.ex. လက်သမား, ကော်ဇောအလွှာ, ပန်းချီဆရာ, Österströms Estate. Företag finns på Holmbygden.se/foretag. ပိုများသောဘယ်မှာအခမဲ့ထည့်သွင်းဖို့ကြိုဆိုကြသည်! Flyer အပေါ် skrivaa ရကြလိမ့်မည်.
ထမ်းဘိုးရွာ၌ငှားရမ်းထားပြီသူတို့ကဒီမှာပျော်မွေ့ကြ. ယခုပြန်ပိုလန်မှရွှေ့မည်, ဒါပေမယ့် Holmes နေစိတ်ဝင်စား. အသစ်ယခုအဲဒီမှာအတွက်ရွှေ့မည်. လွယ်ကူ Holmes အတွက်ငှားဖို့လုပ်ဖို့လိုရှိပါသည်. ဒါဟာအမြဲတမ်းနေထိုင်သူများဖြစ်လာနောက်ပိုင်းစင်ပေါ်မှာလူတွေကိုဆွဲဆောင်.
တစ်တန်းစီအမြဲရှိပါတယ်နှင့်အကျိုးစီးပွား "အသစ်တည်ဆောက်" ရန်အတွက်ရွှေ့ဖို့အမြဲရှိ. အငှားအိမ်ရာများအတွက်လိုအပ်ချက်ရှိပါတယ်. အရမ်းဆိုးကို "အကြီးတန်းအိမ်" နှင့် "ဆရာရဲ့အိမ်" လွဲမှားစွာအုပ်ချုပ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်.
ကျနော်တို့တတ်နိုင်သမျှ Holmsjö Butt မှာလည်ချောင်းနာကျိန်းဝပ် fix "Holmes မှ Gateway မှာ" - Holmsjönဖို့အမြင်အတူလမ်းဆုံမှာ. ဒါကြောင့်ဘယ်နေရာမှာပြီးသားအလွန်အများကြီးရရှိနိုင်လမ်းကိုချဲ့ထွင်ရန်အဆင်ပြေပါကအဆိုပါပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာနနှင့်ပြောဆို. သငျသညျပြည်နယ်အစိုးရများကဤတစ်အလှူငွေရနိုင်. လာမယ့်အစည်းအဝေးအဘို့အခွင့်အလမ်းများ၏ယာဉ်အသွားအလာအာဏာပိုင်ကိုကြည့်ရှုခြင်း.
အဘယ်အရာကိုမျှကွန်ကရစ်ရောင်းရန်Affär'nန်းကျင်ခဲ့သည်. သက်ဆိုင်သူများသို့သော်ဖြစ်ကြသည်, ဒါပေမဲ့ဘာမျှမယ့်ရိုက်ချက်၏ရောက်လာပြီ.
ဆွေးနွေးလောင်စာဆီစုပ်စက်၏ status. အလက်ဇန်းဒါးကစောင့်ရှောက်ရန်လိုလား, ဒါမှမဟုတ်တစ်စုံတစ်ဦးကဂရုစိုက်လိုအပ်ပါတယ်? K သည်လာမယ့်အစည်းအဝေး ollas တက်.
ကျနော်တို့သူတို့တစ်တွေစုပေါင်းမော်ဒယ်မှာသူတို့ရဲ့စုပ်စက်နှင့်စတိုးဆိုင်ကို run ဘယ်လို Ljustorp စကားပြောသင့်တယ်. လွမ်းဆွတ်မှုအစည်းအဝေးအတွက် Ljustorp အတွက်အဆက်အသွယ်ကိုကြည့်ရှုခြင်း.
HBU’s dokumentsamling (ဒါရိုက်တာများများအတွက်)
Läs dokument och protokoll från möten (ဝင်းဒိုးအသစ်ဖွင့်လှစ်).
1. သင်၏ Google အကောင့်နှင့်အတူ Google Drive ကိုရန်ဝင်ရောက်မည်.
2. ထို့နောက်အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ “ငါနှင့်အတူအမျှဝေ” HBU ရဲ့ folder ကိုရှာတွေ့မှလက်ဝဲဘက်.
လော့ဂ်မပေးနိုင်! ပျောက်ဆုံးနေ Google အကောင့်ကို!
သင့်အီးမေးလ်ကို Gmail သငျသညျအလိုအလျှောက်တစ်ဦးက Google account တစ်ခုရှိ Is. သင်ကမရှိပါက, gör ett Google konto här, သာ 2min ကြာ!
ထိုအခါကိုကလစ်နှိပ်ပါ “ငါသည်ငါ့လက်ရှိအီးမေးလ်လိပ်စာသုံးစွဲဖို့ပိုနှစ်သက်”, သငျသညျသစ်တစ်ခုဂျီမေးလ်လိပ်စာဖန်တီးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ Google အကောင့်တစ်ခုအဖြစ်သင့်လက်ရှိအီးမေးလ်လိပ်စာကိုသုံးနိုင်သည်.